Football Khabar » रामोसले रियल मड्रिडसँग ‘डिभोर्स’ गर्दै, कहाँ जाँदैछन् ?
रामोसले रियल मड्रिडसँग ‘डिभोर्स’ गर्दै, कहाँ जाँदैछन् ?
स्पेनिस रियल मड्रिडका कप्तानसमेत रहेका डिफेन्डर सर्जियो रामोसले क्लब छाड्ने सम्भावना बढेको छ । स्पेनिस मिडिया रिपोर्टअनुसार रियल र रामोसबीच ‘डिभोर्स’ हुने सम्भावना बढेको हो ।
क्लबका अध्यक्ष फ्लोरेन्टो पेरेजसँग सम्बन्ध चिसिएपछि रामोस रियल छाड्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । युरोपियन च्याम्पियनस लिगमा अन्तिम १६ मा रियल डच टिम आयाक्ससँग पराजित भएदेखि नै पेरेज र रामोसको सम्बन्धमा खटपट सुरु भएको थियो ।
त्यसैबेला रामोसले ‘आफूलाई पैसा तिरे रियल छाड्ने’ धम्कीसमेत दिएका थिए । पेरेजले रियल च्याम्पियन्स लिगबाट बाहिरिनुको मुख्य कारण रामोसलाई ठानेका छन् । अन्तिम १६ मा रामोसले जानी–जानी कार्ड खाएर थप प्रतिबन्धमा परेपछि अन्तिम १६ को दोस्रो लेग गुमाएका थिए ।
त्यसपछि रामोस र पेरेजबीच लगातार सम्बन्धमा खटपट पैदा हुँदै आएको छ । पेरेजको व्यवहारबाट रामोस खुसी छैनन् ।
केही समयअघि पनि एक अन्तर्वार्तामा रामोसले आफू थकित भएको र अब कप्तानको आर्मब्यान्ड नलगाउने बताएका थिए ।
खबरअनुसार ३३ वर्षीय रामोसले चिनियाँ सुपर लिग जान चाहेका छन् । यसअघि केही मिडियाले स्पेनबाहिरका च्याम्पियन्स लिग खेल्ने राम्रो अफर गर्ने जुनसुकै क्लबमा जान सक्ने रिपोर्ट आएको थियो ।
प्रकाशित मिति १४ जेष्ठ २०७६, मंगलवार ०३:०२